Hay Baler, Baler Machine, Rotary Tedder, Wood Chippers, Rotary Disc Mower - Hualand
Voaray izahay Advanced-teknolojia
Ny tsara indrindra-fanompoana mandaitra
mifantoka amin'ny kalitao
Hay Fiovana farany Finger
Hay Tedder Ary Fiovana farany
Rotary mpiasa GQM125-220
Rotary mpiasa GQY125-220
Rotary mpiasa GQN125-220
"Weifang HUALAND milina CO., LTD" varotra iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny 2004. vokatra voalohany teo anoloan'ny tsipika farany loader sy backhoe ho an'ny traktera. Tamin'ny 2006 Huamachinery hazo PTO-dalam-pandrosoana sy ny solika chipper hazo tsara chipper.Both namidy tamin'ny traktera world.other kofehy mifamatotra no mandroso, toy ny, farany Mower, slasher, lalana sweeper, snowblower.In 2010 Huamachinery OEM-dalana fanorenana milina for brazil.And ankehitriny Huamachinery manana 5 fanodinana atrikasa, 3 fivoriambe atrikasa, 1 ambonin'ny fitsaboana atrikasa, 2 vokatra vita ny trano fanatobiana entana, 2 faritra trano fanatobiana entana, 1showroom; 3 entana tsipika: haying milina feon'ireo milina 3PT kofehy mifamatotra ho traktera-anoloan'ny loader farany, backhoe, ny oram-panala blower, lalana sweeper sy sns 100 mpiasa sy 6 injeniera ...
Hay Square Baler - 1.9
Hay baler amin'ny cutter 0910C
Rotary mpiasa GQE120-200
Wood Chipping Tractor Tanteraho WC-18/22
Round Hay baler RXYK-0890
Ny Model 2500 dia azo ampiasaina amin'ny traktera for 18-50hp 1 voalohany mampiditra ny fiangonana lehibe iray teboka telo hitch. Rehefa fametrahana ny tine fifidianana, ho azo antoka fa ny bearings dia ao anatin'ny lalamby eo amin'ny lafiny ambany ny hub.The fitsapan-kevitra tine dia mifandray amin'ny alalan'ny horonan efatra. 2 Ataovy azo antoka fa ny T ...
Misy ny zavatra tokony hatao eo anatrehan'i miasa amin'ny Mini baler manodidina. 1 Afatory ny baler ho teboka telo hitch. Izany dia hanome fahafahana anareo mba hanomezana hery sy hifindra ny baler raha manatanteraka ny fiangonana. 2 ianao dia mila voatahiry retrieve ny faritra ao anatin'ny baler mampitohy. Mba retrieve ny faritra, Remo ...
Adiresy: Weifang tanàna, faritanin'i Shandong, Sina